रेडियोका सेलिब्रेटी दिलु गन्धर्वः खड्का भए पनि गन्धर्ब प्यारो
Thu, Apr 19, 2018 | 21:23:58 NST
10:49 AM (9months ago )
काठमाडौं, असार २३ – केही वर्ष पहिले बिबिसी नेपाली सेवाको ‘कथा मिठो सारंगीको’ रेडियो नाटक धेरैले सुनेको हुनुपर्छ । जतिले सुनेका छन्, उनीहरुले दिलु गन्धर्बलाई झट्ट सम्झेको पनि हुनुपर्छ । तिनै दिलु गन्धर्ब अब नेपाली सिनेमा ‘नाका’ मा देखिने भएका छन् । कलाकार विपिन कार्कीसँगै उनले अभिनय गरेको सिनेमा ‘नाका’ यतिबेला सुटिङ सकिएर प्राविधिक कामको चरणमा रहेको छ । अनुप बरालसँग अभिनय सिकेका दिलु गन्धर्वले आधा दर्जन बढी नाटकमा अभिनय पनि गरिसकेका छन् । सामान्य र सरल स्वभावका दिलुको वास्तविक नाम भने प्रकाश गन्धर्व हो । उनी रेडियो नाटकबाटै धेरैको मनमुटुमा बस्न सफल भएका एक सेलिब्रेटी पनि हुन । तिनै प्रकाश गन्धर्व अर्थात दिलुका व्यक्तिगत केही रोचक जानकारीहरु आज हामी प्रस्तुत गर्दै छौँ ।
खड्का हुन् दिलु, तर गन्धर्व प्यारो
दिलुको जन्म गुल्मीमा भए पनि मामा घर पोखरामा हुर्किए । खासमा उनका बुवा लाहुरे हुन् भने थर खड्का क्षेत्री । अन्तरजातीय विवाह थियो दिलुका बुवा आमाको । आमा गन्धर्व भएकै कारण समाजले तल्लो जातसँग बिहे गर्न हुन्न भनेर आमा बुवालाई छुटाई दिएका थिए । यसको चपेटामा प्रकाश ‘दिलु’ परे ।
उनी पोखरा मामाघरमा हुर्किए र सारंगी बजाउन सिके । बुवासँगको सम्बन्ध नराम्रो भएकै कारण उनले आफ्नो नामको पछाडि आमाको थर झुन्ड्याए । गन्धर्व नै किन राख्नुभयो ? जवाफमा दिलु भन्छन्, ‘यो त सबैले पाउँदैन । गन्धर्व बन्नु भनेको सारंगीसँग खेल्नु हो । सारंगी बजाउने रहर सबैको भए पनि कमैले त्यो मौका पाउँछन् । म गन्धर्व हुँ भन्न पाउँदा गर्वको अनुभूति पनि हुन्छ ।’
दिलुले ‘कथा मीठो सारंगीको रेडियो नाटक तयार गर्दा होस् या गीत गाउँदा, उनी देशका अधिकांश ठाउँमा पुगेका छन् । उनी कथा मीठो सारंगीमा आवद्ध हुनुअघि गाउँ–गाउँमा गीत गाउँदै हिँड्थे । हुन त अहिले पनि मौका पाउने बित्तिकै उनी गाउँ छिर्छन । ‘गाउँमा जानुको मुख्य उद्देश्य भनेको समाज बुझ्नु हो । ज्ञान लिनु हो । तर सारंगी बजाएर पैसा मागेको भन्दै गाली गर्नेहरु थुप्रै भेटेको दिलुको अनुभव छ । ‘यत्रो ज्यान छ काम गरेर खा, मागेर हिड्न लाज लाग्दैन ? उनीहरु यसरी मलाई हकार्छन् । तर मलाई त्यो सामान्य लाग्छ, दिलु भन्छन् ।’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘अझै पनि घर भित्र छिर्न दिँदैनन् । बाहिर बस् भन्छन् । अलि दुःख लाग्छ ।’
दिलु गन्धर्व कास्की जिल्लाको पोखरामै हुर्के बढे भने उनले जानेको कलाले उनलाई त्यो ठाउँमा थोरबहुत नाम र दाम दिएको थियो । उनले कास्कीको धम्पुसमा धेरै पटक लोकदोहोरी गीत गाएर बाजी जितेका थिए । जितसँगै उनले कयौं पटक कुखुराको भाले र खसीसमेत पुरस्कार समेत पाएका थिए । उनको चर्चा चलिरहँदा पोखरामा बिबिसीको कथा मीठो सारंगीको टिम नाटकका लागि युवा गन्धर्व खोज्दै पुगेका थिए ।
त्यहीबेला उनको भेट खगेन्द्र लामिछाने र टिमका अन्य साथीहरुसँग भयो । त्यसपछि उनको जीवनले नयाँ मोड लियो भने उनी प्रकाश गन्धर्वबाट दिलु गन्धर्व भए । उनले रेडियो नाटकबाटै लाखाैं श्रोता प्रशंसक कमाएका छन् । एक हिसावले भन्ने हो भने उनी रेडियोबाट जन्मेका एउटा सेलिब्रेटी हुन् ।